Malaa'igta iyo jinniyada tattoos | Tattoo
Nat Cerezo | | Tattoos diimeed
Dunida dhexdeeda, haddii aan ka hadalno taatikada dabeecad diimeed ama "ruuxi ah", labadaba malaa'igta iyo astaamaha jinni waa la yaqaan. Waana taas waa mid kamid ah matalaada ugu caansan gudahood qaybtan tattoos ah.
Taasi waa sababta maanta aan u dooneyno inaan ka hadalno tattoosyada malaa'igaha iyo jinniyada. Waxaan raadineynaa sababaha ama ujeeddooyinka u horseedi kara qofka inuu sawiro jinni iyo malag labadaba. Oo haddaad xiisaynayso mawduuca, ha ilaawin inaad ka akhriso qoraalkan malaa'igta u waxyoonay tattoos.
1 Micnaha taatikada jinka
2 Fikradaha loogu talagalay tattooska jinka
2.1 Jinniyo duulaya
3 Micnaha sawir gacmeedka
4 Fikradaha tattoo tattoo
4.1 Malaggii dhimashada
4.2 Mas'uulka Mas'uulka ah
4.3 Malag dhacay
4.5 Baalal malaa'igo
4.6 Nooc kale oo malaa'igo ah
5 Malaa'igo isku qasan iyo shayaadiin
6 Sawirrada Tattoos Malaa'igta iyo Jinniga
Micnaha taatikada jinka
Marka laga hadlayo jinka, ka tagista tixraacyada suurtagalka ah ee Shaydaanka ama jaahilnimada in dadka intiisa badan ee isaga raacaa ay qayb ahaan ka warqabin asalkooda, tattoosyada jinniyada ayaa loo taagay inay yihiin calaamad cad oo diidmo ah. Hab lagu muujiyo caasinimadeena iswaafajinta bulshada ee maanta ka jirta inta badan lakabyada bulshada. Dadka kale, shayaadiinta jinku waxay astaan ​​u yihiin sharnimada, anshax darrada, ama danaysi ahaanta ku dhex jirta xaaladda aadanaha.
Fikradaha loogu talagalay tattooska jinka
Hadaad taada tahay Waxaad tahay shaydaan cadaabta waxaadna dooneysaa inaad midkood maqaarkaaga ku sawirto, waxaan diyaarinay dhowr fikradood oo aan kugu dhiirigaliyo.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu matali karo jinni, laakiin badiyaa waxay leeyihiin qaab dadnimo leh waxayna yeelan karaan ama lahaan karaan baalal. Taas lafteedu waa cabsi badan, laakiin hadda qiyaasi inay tahay kaliya madax baalal leh ... Haddii aan helno wax sidaas oo kale ah, waxaan u maleyneynaa inaan bilaabi karno inaan buurta ka degno Dabcan, sida tattoo waa wax aad u qabow.
Dalka Japan sidoo kale waxay leeyihiin noocyadooda jinniyo. Waxay ku caan baxeen oni muuqaalkooduna wuxuu lamid yahay kan jinniga reer galbeedka ama oggooyinka. Waxaa lagu matalaa ciddiyo iyo, guud ahaan, oo leh hal ama laba gees. Midabka maqaarkoodu badanaa wuu ku kala duwan yahay casaan, buluug, casaan, madow ama cagaar.
Si aad uhesho muuqaal aad uxun waxay badanaa xirtaan maqaarka shabeelka waxayna xirtaan a kanabō, oo ah hub loo adeegsaday xilliyadii dagaallada oo ka koobnaa shaqaale bir lagu dahaadhay oo leh diilino.
Noolahan waxaa lagu matalay manga iyo anime fara badan. Xitaa ciyaaraha kala duwan ee fiidiyowga, sida CD-ga ugu dambeeyay ee 'Projekt', Cyberpunk 2077, halkaas oo astaanta kooxda Samurai ay tahay oni cybernetic.
Waxay u muuqataa in ereyga baphomet (taas oo kuxiran afka iyo sida loo adeegsado waxay yeelan kartaa dhowr macno) waa midaas oo ay adeegsadeen baarayaasha si ay u keenaan duminta Templars sida bidcada.
Si kastaba ha ahaatee, qoraallada kale ee Templars Baphomet waxaa lagu qeexay nooc shaydaan ah, hermaphrodite, midab madow, oo leh naaso, gadh iyo geeso. In kasta oo ay u muuqato in macluumaadkan lagu been abuuri karo caqli xumo bartamihii iyo dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad.
Micnaha sawir gacmeedka
U guuritaanka tattoos ee malaa'igaha, waxay muujinayaan dabeecad diimeed oo furan oo aad ugu baahsan adduunka Galbeedka. Malaa'igahu waxay u ekaadaan muuqaalka aadanaha baalasha leh oo hadafkoodu yahay inay ereyga ilaahay u gudbiyaan aadanaha Waxay ka kooban yihiin doonis rabbaani ah, nimco, qurux, iyo kaamilnimo.
In kasta oo wax kasta oo ku saabsan malaa'igtu aysan xiriir la lahayn Katooligga, haddana waxaa run ah in ay diinta tahay tan leh fikirka aad u qoto dheer ee malaa'igta. Laakiin si xiiso leh erayga "malaa'ig" wuxuu ka yimid LatinkaAngelusKaasoo ka yimid Giriigga "ἄγγελος" (malaa'igaha) oo macnaheedu yahay "farriin". Waxay umuuqataa in magacani horeyba loogu adeegsaday giriigga Giriigga ee Angelia, oo ahaa dhambaalka ilaahyada iyo gabadha ilaaha Hermes.
Fikradaha tattoo tattoo
Tattoo Angel Iyagu maahan oo kaliya farmaajo iyo waxay ka buuxaan baalal, halos iyo falaadho rabbaani ahMararka qaarkood waxay noqon karaan kuwa ugu xun. Waxaan wax yar kaaga diyaarinay xulkan.
Waxay u muuqataa in Yuhuudda iyo Muslimiinta dhexdooda magaca loo bixiyay malaa'igta dhimashada uu yahay Azrael, oo leh howlgalka aqbal nafta dadka dhintay una qaado si loo xukumo. Tattoo, waxaa caadi ahaan lagu sawiray qalfoof baal leh.
Masiixiyadda, In kasta oo aanu jirin cinwaan gaar ah oo ah malaa'igtii dhimashada, shaqadani waxay ku dhacaysaa malaa'igta sare Michelangelo. Mararka qaarkood dhimashadu waxay ku dhex jirtaa malaa'ig si ay u siiso taabashada aan ku aragno sawirka soo socda.
Mas'uulka Mas'uulka ah
Malag noocan ah ayaa aad ugu baahsan diinta katooliga. Waxaa la rumaysan yahay in qof kastaaba leeyahay malaa'ig ilaalin ah oo hagta kana ilaalisa fitnada si uu jannada ugu galo. Waxay sidoo kale noqon kartaa qof aad jeceshahay oo hadda dhintey oo ilaalinaya nabadgelyadeena. Badanaa waxaa lagu sawiray sidii malaa'ig hoos fiirineysa, sida haddii ay na daryeesho.
Dhinaca kale, waxaan isku darsan karnaa nooca malaa'igta masuulka ah ee loo yaqaan 'tattoo' iyo wax yar oo dagaal ah si loo abuuro tattoo soo socda. Malag u muuqda mid ilaalinaya laba qabri, oo ah tan dumarka iyo tan qofka hooyadiis la xardhay.
Malaa'ig dhacday ayaa ah mid samada laga saaray, markaa baalashiisa waa loo jeexjeexay caasinimada Ilaah darteed. Waxaa jira dhowr malaa'igood oo dhacay, tusaale ahaan, oo loo yaqaan 'Grigori, Mephistopheles (oo lagu soo qaatay' Goethe's classic '), Semvazza iyo, laga yaabee kuwa ugu caansan, Lucifer. Tattoo-gu wuxuu ka dhigan yahay kacdoon, xaqiiqda ah inaan la rabin in la raaco amarrada qof walba.
Ereyga keruub waxay umuuqataa inay ka timid Cibraaniga keruub, taas oo macnaheedu noqon karo xiga ama ilbiriqsiyada, tani waxay loola jeedaa kooxaha malaa'igta ee hoggaamiya seraphim. Kaliya kuwa ku jira xaalad sidan oo kale u sarreeya ayaa arki kara keruubiimta inay haystaan ​​cirka meel ay gaari karaan. Sida laga soo xigtay Kitaabka Quduuska ah, keruubiimta ayaa mas'uul ka ah ammaanta Ilaah. Heerka sawirka, keruubku wuxuu siiyaa dareen wanaag, oo ka duwan tattoos malaa'igaha dhacay ama malaa'igtii dhimashada.
Beddelka kale ee loogu talagalay tattoo waa baalasha malaa'igta. Waxaa jira astaamo badan oo noocaas ah, laakiin caadi ahaan waa labo astaamood oo xagga dambe ah oo matala labada baal. Tattoo-gaani wuxuu qariyaa macnayaal badan, waxay noqon kartaa in qofka la xardhay uu raadinayo xorriyad, ama inay xusuusato qof dhintay.
Nooc kale oo malaa'igo ah
Sida had iyo jeer aan kuu sheegno, male-awaalkaagu waa xadka. Tusaale ahaan, xaaladdan qof baa ku fikiray inuu Igor ku dhex daro malaa'ig si uu u siiyo taabashadan taabashada ah.
Waxaan sidoo kale haynaa tusaale kale oo malaa'ig ah, oo isku daraya gabar ku jirta casriga ama qaabka loo yaqaan 'Art Nouveau' oo leh baalal malaa'ig ah. Natiijadu waa tatoobkan cajiibka ah. Taabashada midabku sidoo kale way fiicnaan kartaa, gaar ahaan haddii laguu waxyooday, tusaale ahaan, xilliyada sannadka.
Malaa'igo isku qasan iyo shayaadiin
Marka ay timaaddo matalaadda tattoos ee malaa'igaha iyo jinniyada waxaa jira fursado badan iyo waxyaabo kale. Waxaan ka helnay suurtagalnimada in la sawiro garabka malaa'igta iyo garabka jinka, halka aan sidoo kale dooran karno inaan qabsanno dagaal u dhexeeya labada hay'adood. Iyo kuwa jecel xaqiiqda, waxaa badanaa loo doortaa inay ku muujiyaan xoogaa matalaad ah iyo sawirka diinta masiixiga maqaarka.
Laakiin wax walba ma soo maraan malaa'ig ama jinni, sidii aan hore uga soo hadalnay. Waxaa jira kuwa rumaysan inay labadaba yeelan karaan, maxaa yeelay dadku ma ahan mid ama mid kale, innagu ma nihin madow ama caddaan, laakiin taa beddelkeeda waxaan nahay hooska cawlan oo ku kala duwanaan kara sida xilligan la joogo.
Sidaa awgeed, waxaa lagu matali karaa laba shaati, malaa'ig iyo jinni. Waa wax lagu qoslo, maxaa yeelay waa cunsur ku soo noqnoqota sawirro badan oo kartoonno ah, halkaas oo mid ka mid ah jilayaasha uu shaydaanku duufsanayo inta uu haysto malaa'ig yar oo u sheegaysa in aanu samayn.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkan ku saabsan malaa'igta iyo shayaadiinta jinniyada ay kugu dhiirrigelisay inaad hesho naqshadaada saxda ah. Noo sheeg, ma leedahay tattoo sidan ah? Ma jiraa naqshad aad si gaar ah u jeceshahay? Noo sheeg waxaad rabto faallooyinka!
Sawirrada Tattoos Malaa'igta iyo Jinniga
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos diimeed » Malaa'igta iyo jinniyo tattoos
Tattoo Daisy: ururinta naqshadaha iyo macnaha